Imizwelo njengenye yezingxenye of intelligence social
imizwelo - kwenye yezingxenye of intelligence social, ezihlanganisa uzwela inkulumo yomphakathi, ikhono self-lokulawula. Igama elithi yazibonakalisa esetshenziswa kudala, kodwa eminyakeni yamuva sisakazeke kabanzi. He is uhlukile umqondo owaziwa "intelligence". Psychology uhlola isigaba sokulawula imizwelo nekhono uzulazule kahle isimo, ukubona nekubona uthi esingokomzwelo kubantu ababezizungezile.
Imizwelo empilweni yomuntu lubonakala ngaso sonke isikhathi. Ekhumbula, isibonelo, izingxoxo zakhe nge interlocutors ahlukahlukene, sizithola ukucabanga ukuthi othile ukuxhumana kalula futhi wesilisa, futhi nomuntu kunzima ukuthola ukuba nolimi olulodwa olwaziwayo. Lapho ukhuluma nomngane enyukubele, ngaphandle kokunezela noluncane imizwelo ngobuso, kunzima ukuqagela ukuthi kuba indaba yakho ezithakazelisayo. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ngenkuthalo usebenzisa isimo sobuso nokushukuma komzimba kule ukuxhumana ke kulula ukuya ku Oxhumene naye.
Sikhanyisiwe imizwelo kuyasiza basheshe bamise oxhumana nabo, ukulawula yabo nemizwa nemizwelo, ukuba sibonise ukubekezelelana. Yingakho eminyakeni pre-school ukuze lasungulwa ukhokha kakhulu ukunakwa.
Ngokusho theory umsebenzi, zokuxhumana ngokomzwelo nabantu abadala uhlobo phambili nomsebenzi wengane, lena yobudala senzitiven sokuthuthukiswa imizwelo. Ngokuvamile izingane azikutholi contact ngokwanele sezinzwa nabazali babo phambili esikhathini esizayo ukuze kwezinso e ngokomzwelo futhi volitional, okuyinto ngemuva kwesikhathi esithile kungaholela nokubambezeleka of kwengqondo futhi inkulumo.
I zasenkulisa othisha, odokotela bengqondo nabafundisi ukuthuthukisa izinhlelo, imidlalo zemfundo namabhukwana, ukuthuthukisa uzwela usizo izingane ukuhlukanisa phakathi uthi abanye abantu ngokomzwelo kwabo nokwabanye.
imizwelo ithuthukiswe engu zasenkulisa, kwenza kube nokubambisana baphumelela kakhudlwana, kumiswa i eyanele ukuzethemba, kwandisa nezimo ezihlukahlukene nezimo ezintsha zokuphila we omdala kanye nengane. Ngakho-ke, enkulisa ukugcizelela kakhulu emidlalweni ku umehluko imizwelo, imidwebo ehlukahlukene ukubonisa noma isimo esingokomzwelo, umfanekiso spectrum ebanzi imiphi imizwa yabantu.
imizwelo kusiza ukuthuthukisa opopayi okuhle futhi okuhle. Kukhona okuningi nangolimi izithombe yesimanje. Ukuthi izingane eziningi izinhlamvu ozithandayo kuthiwa uhlanekezelwe ubuso (isib, Transformers, Bakugan nezinye izinhlamvu), okuyiwona akunakwenzeka ukuba lokhozi imizwelo yabo. Nakuba kulezi movie animated kuba inkinga okuphakade zivela ngalesikhathi umzabalazo phakathi kokuhle nokubi, lapho elingenhla isandla goodie, ubuso bakhe akusho ukubonisa noma yimiphi imizwa - akunakwenzeka ukwazi lapho ejabule noma edumele, uthukuthele noma kabi. Izingane abachitha isikhathi esiningi ubuka i-data opopayi Ujwayele kahle ngokomzwelo futhi volitional: njengoba umthetho, kukhuphuke ulaka unmotivated, ezingeni lelisetulu nokukhathazeka, intukuthelo, ukungabi nozwela nobubele.
Ukuthuthukiswa sokulawula imizwelo e zasenkulisa kunomthelela umuntu emphakathini esebenzayo nokuba ezanele ukuzethemba - lawa izithako impumelelo ezweni lanamuhla.
Izinhlobo ezinkulu Psychology zokuhlola
Generator manifest (indoda design): Incazelo
Kanjani ukukhumbula amaphupho? Ngazi kanjani ukuthi iphupho
Ukuhlolwa ngokwengqondo ngoba yokwemukela College of Medicine: izici nezimfuneko
A ingxube odongeni olukhonkiwe. Yini usimende kangcono? Isixazululo ngoba usimende
Funda izindlela ezimbalwa zendlela ukudweba izigaba ipensela skier
Laura San Giacomo, kuyinto actress American indima yehlukene kaningi okubalwa futhi lokusungula
Indlela yokwenza ingane milkshake eholidini?
I amasaladi ethandwa kakhulu eRussia: bayini? isaladi Russian: zokupheka, izithombe kanye nencazelo
"Modern Family": abadlali nezinhlamvu
Inkukhu gizzards: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka. Indlela apheke gizzards inkukhu
Khalara izingubo ingaphakathi: nalokho imibala sihlanganise omnyama
Anel: igama value, uhlamvu nesiphetho
Amalungiselelo Amnandi Futhi ewusizo ebusika: cranberry ushukela
Soloist "A-Studio". Biography Katie Topuriya
Ukusatshalaliswa Inthanethi nge-laptop ku-Wi-Fi: lula futhi elula!